Humambo, iyo nyowani nyowani naJo Nesbø. Ongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Hushe ndiyo nyowani nyowani na Jo Nesbø. Munyori weNorway akasunga ngetani mazita mashoma kwaakapaka Harry Hole, hunhu hwake hunonyanya kuzivikanwa nekutevera. Zvino rima rinotiudza nyaya yehama mbiri. Izvi zvangu ongorora.
1.1 Roy ndiye murondedzero wenyaya uyo anotiudza isu tiri isu. Saka ndiye zvese uye hapana. Ndiyo shiri yemumakomo isina zita.
1.2 "Mhuri ndiyo yekutanga. Zvezviri nani uye zvakaipa. Pamberi pevamwe vanhu.
1.3 “Tese takagadzirira kutengesa mweya yedu. Kunze kwekuti imwe neimwe iise mutengo wakasiyana pairi.
Chii iyo yakavanzika Opgard purazi mugomo. Uye maOpgards imhuri yababa, amai uye mukoma nemunin'ina, Roy naCarl, uko kunogara Roy chete, dangwe, anogara. Ari oga, taciturn, anofarira shiri uye maneja wechiteshi cheguta gasi, anotungamira zvinoita kunge hunyoro uye hupenyu hwakanyarara, pasina kana hukama nevekugara kwake, kunyangwe achiziva vese uye vese vanomuziva. Asi hupenyu ihwohwo huchashandurwa - izvo zvave zvisiri zvekutanga kana kuzove zvekupedzisira - apo munin'ina wake Carl anodzoka mushure memakore gumi nemashanu kunze kwenyika kwaakasiya mushure mekufa kwevabereki vake mutsaona yemotokari.
Carl haadzokere ega, anounzawo Shannon, mukadzi wake, dhizaini uye ane hunhu hunokwezva sezvazviri kunyanya. Uye vese vanouya nehurongwa hukuru hwavo pachavo asiwo kuita kuti nharaunda ibudirire: kuvaka hotera umbozha munzvimbo.
Ivo vane iyo Charisma yaCarl, anogara achifara, anopenya, anofara uye anokatyamadza, pamberi penyararire, zvakakomba uye zvakanyanya kusanyanya kukwezva Roy, uyo agara achitora chestnuts mumoto. Uye zvicharamba zvichidaro nekuti hama dzaOpgard vanovanza dzimwe nyaya dzakawanda kubva kare dzichazobatanidzwa neidzo dzinokonzereswa nezvazvino uye hunhu hwavo, iyo yakatoratidzwa zvinopfuura pachena muchikamu chekutanga chekuvhundutsa.
Roy ndiye murondedzero wenyaya uyo anotiudza isu tiri isu. Saka ndiye zvese uye hapana. Ndiyo shiri yemumakomo isina zita.
Ndozvinotaurwa naCarl mukukurukurirana achangosvika uye nekuzvizivisa kumukadzi wake. Roy ndiye anotiudza nyaya yese mumunhu wekutanga, izwi rinowanzoitika rerondedzero rinoshandiswa naNesbø mumanovelisi akaburitswa kunze kwenyaya dza Harry hole, se Vanotsvaga o Ropa muchando y Ropa zuva. Uye zvinoratidza izvozvo agara zvakanaka maari. Tese isu tinonyora hafu tinoziva kuti zvinobvumidza rusununguko rwakawanda rwekuita kune akasiyana mafiro atinoda kutora, kunyangwe tichifanira kupira poindi yekuona kwevamwe vatambi. Uye zvakare, Roy anotaurira muverengi kakawanda, sekunge anga achitaura nesu akazendamira pabhawa pari uye nekunwa nguva nenguva.
"Mhuri ndiyo yekutanga. Zvezviri nani uye zvakaipa. Pamberi pevamwe vanhu.
Ndicho chirevo icho anoipfupisa uye anoisa zvese izvo zvinoverengwa mukati Hushe. Ndiyo chete kurudziro uye pfungwa yekuti Roy anofanirwa kumuitira zvaari kumuitira iye uye kunyanya mukoma. Uye zvazvinoita ndezveZVESE uye PASINEI NEZVESE.
Ndakaverenga nezve chikamu chechitendero (chisiri ngano, vanogadzira misoro mune vezvenhau) mune ino nyaya pamwe chete Kaini naAbheri, ayo ari zvakare mazita echipiri evatambi. Asi kwete, hapana izvo nekuti nyaya iyi haiperi senge yehama dzekutanga dzemubhaibheri. Izvo zviripo ndizvo zvakajairika muNesbø, iyo isinganyengere chero munhu kana, zvirinani, kwete vaverengi vayo vakavimbika: a wakakura mufananidzo wehunhu hwevanhu unogara uchifamba pakati perudo nerufu zvinoratidzwa nenjodzi.
Carl Carl Opgard haana chokwadi uye ane moyo Abheri, kunyangwe akashungurudzwa, uye Roy haasi Kaini ane tsitsi. Uye unozvikurudzira nazvo paunenge uchisvika pakuvaziva uye Nesbø —nehunyanzvi uhu hwekutengesa - hunokutendera kuti uone kutsemuka kwakadzika mumatehwe avo panguva chaiyo. Kubudirira, izvo zvinowanzoitwa nemunyori, ndizvozvo newewo uzviise muganda iro, kunyanya maRoy, waunoona uchiperekedza (uye uchipembedza) nechinangwa chimwe chete nematanho aari kutora, kunyangwe akaipisisa.
Chii chausingaitire hama uye chinyadzo chekuviga kana kusadzivirirwa chinonyangadza? Roy anotakura izvo uye nemutoro uye nerudo rwehama asiwo kushungurudzika, kunyadziswa negodo, kutsamwira hunyengeri uye kushaya simba, nekunyanyisa kuda chinzvimbo uye kutengesa kweropa iro rako uye rawakabayira nekuparadza zvese munzira dzisingambofungidzike. Uye zvakare rudo rwaunofunga kuti rwakakodzerwa newe, runogona kuve rwakanaka uye rwechokwadi kamwechete muhupenyu hwako, nekuti iyo yaunorarama iko kukanganisa kwakazara. Zvakanaka Roy akaita, anoita, uye anoda uye anozopa zvese yehama yake, kunyangwe Carl asingakodzeri zvachose. Ndiwo mutambo wekutamba.
“Tese takagadzirira kutengesa mweya yedu. Kunze kwekuti imwe neimwe iise mutengo wakasiyana pairi.
Iko kurongedza kunopedzwa neye gallery yevatambi yechipiri kune avo vanotungamirwawo nekuchiva, kunyepa uye nekuonekwa. Kubva kumutengesi wemotokari anomhanyisa emporium yemuno uyezve asina mari anokweretesa mari, kumukadzi wake, kune vashandi vepa gasi, aimbove meya, mutori venhau uye murume wewaimbova musikana waCarl Opgard kana muridzi webvudzi ane makuhwa uye jilted.
Zvese zvakakomberedzwa nharaunda ine husimbe uye inodzvinyirira yemataundi madiki uko kune zvakawanda zvekuhwanda mumakabati, kunyanya zvakavanzika neropa. Chete Kurt olsen, mupurisa ari kuferefeta zviitiko zvese zvakapfuura nezvazvino zvakatenderedza maOpgards, zvinoita kunge akatsunga kuwana chokwadi chisingambouya. Uye kunyangwe Shannon, mudzimai waCarl, achapepeterwa mukufashukira kwezvakavanzika nematambudziko emurume wake nemukuwasha wake: "Tinodarika hunhu kuzviisa pakushandisa zvido zvedu patinonzwa kuti pasuru yedu iri kutyisidzirwa . "
Kuchatevera gakava risingaperi pakati pevaverengi vanongoda Harry Hole uye ayo atinofarira netsamba imwe neimwe inonyorwa naNesbøZvimwe nezvemupurisa iyeye wezvedu rudo uye kusuwa kana nezve chero nyaya inouya mupfungwa.
Ivo vese vane mucherechedzo, kupatsanurwa kwake kwakasarudzika kwekukonana kwevanhu, nezvakanakisisa uye zvakaipisisa zvatiinazvo kana zvatinokwanisa, kugona kwake kuti tiite kuti tifunge chinhu chimwe uye zvinopesana neiyo yakananga kurondedzera, kune iyo livers uye kune iyo moyo, kuti atitsvagire uye kubvisa iyo yakasviba poo nekuzvipembedza. NaNesbø, uye nguva dzose pasina kupokana, iro rima rakajeka sechiedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Humambo, iyo nyowani nyowani naJo Nesbø. Ongorora
MARIA LUZ ANIBARRO HERNANDEZ akadaro
Ino inguva yekutanga kuverenga kwandakaita munyori uyu. Bhuku racho rinoratidzika kunge rinonakidza kwandiri asi rine zvikanganiso zvekushandura. Ndakanga ndaudzwa kuti Nesbo ndiye aive mambo webhuku revatema uye ndakaodzwa mwoyo.
Pindura MARIA LUZ ANIBARRO HERNANDEZ